Deegaanka - Cusboonaysiinta Cagaaran | Cusboonaysiinta Cagaaran (Bogga 3)
Maxay u jiraan dhagaxyo waawayn oo ku yaal qarka iyo xeebta?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa baaritaanka caddaynaya sababta ay u jiraan dhagaxyo waaweyn oo ku yaal bartamaha xeebta ama dusha sare. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato?
Jayku wuxuu xulafo u yahay dib-u-noolaynta keymaha Boortaqiiska
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa Hindisaha Montis ee ah inuu jay u adeegsado xulafaynta dib u soo noolaynta keymaha gubtay ee Boortaqiiska.
Tirada noocyada loo hanjabay ayaa jabinaysa rikoor cusub sanadkii 2017
Mashruucan, noocyada loo hanjabay marka loo eego sanadkii hore ayaa la falanqeeyay. Ma rabtaa inaad ogaato inta ay le'eg tahay tiradaasi?
Badaha ayaa xaalufin badan weligood
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa xaalufka weyn ee badaha adduunku ku hayaan dhibaatada aadanaha. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Cudurka Cudurka Madhan
Qoraalkan waxaan uga hadlaynaa muhiimada ay leedahay is dhexgalka noolaha ku nool keynta si ay u noolaadaan. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Dib-u-warshadaynta waraaqaha iyo kartoonnada ayaa kordhay sannadka 2017-ka
Qoraalkani wuxuu ka tarjumayaa xogta ku saabsan kororka waraaqaha iyo dib-u-warshadeynta kartoonka Spain gudaheeda 2017 iyo waxa la filayo. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Saamaynta isbeddelka cimilada ee shinnida iyo raadkeeda
Isbedelka cimilada ayaa saameyn ku leh jiritaanka shinnida. Tani, markeeda, waxay halis gelinaysaa beeraha Spain. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Cabashooyinka bay'ada waxay leeyihiin natiijooyin
Qoraalkan waxaan ku arki doonnaa tusaalooyin ka mid ah saamaynta ay mudaaharaadyada deegaanku ku leeyihiin dhismaha. Ma rabtaa inaad ogaato inay runti shaqeeyaan?
Sii waara badan si loo joojiyo luminta Amazon
Amazon waxay ku jirtaa cadaadis weyn oo ka imanaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee baabi'iya nidaamyadeeda deegaanka. Sidee loo waaraa?
Meerahu wuxuu lumiyay kalabar hareeraheeda
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in adduunka oo dhan uu horay u lumiyay kalabar badmaaxiisii. Cawaaqib noocee ah ayey tani keenaysaa?
Trump wuxuu saxiixay soo jeedin ah in laga faa'iideysto saliida Arctic
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa saxiixay sharci si shidaalka Arctic looga faa’iideysto. Waa la fulinayaa?
Halkan u gal si aad u baratid waxa uu yahay wareegga biyuhu, heerarkiisa ugu muhiimsan iyo muhiimadda uu ugu leeyahay meeraha. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato biyaha?
Bonn COP23 gaar ah, maxaa ka baxay shir madaxeedka cimilada
Mareykanku wuxuu kaga dhawaaqayaa COP23 inuu ka baxayo heshiiskii Paris halka gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ay sii kordhayaan.
Ogaanshaha raadkeena deegaan wuxuu muhiim u yahay bilaabida yareynta caadooyinka waara, helitaanka natiijo shaqsiyeed iyo fahamka sida ay u shaqeyso.
Wasakheynta hawadu waa dhibaato xagga deegaanka ah oo si sii kordheysa u saameysa caafimaadka dadka ku nool magaalooyinka waaweyn. Maxaa laga qabtay?
Kaabsoolka kafee waa nooc qashin ah oo ay tahay in lagu ururiyo weel nooc kale ah. Ma rabtaa inaad ogaato sida dib loogu warshadeeyo?
Shimbiraha caadiga ah ayaa sii kordhaya
Shimbiraha Isbaanishka waxay la il daran yihiin saameynta uu bani aadamku ku yeeshay hoosna waa ay u dhacayaan. Ka waran xaaladdan?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato horumarka waara
Halkan waxaan ku sharaxeynaa waxa horumarka waara uu yahay, astaamahiisa, asalkiisa iyo noocyadiisa. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato?
Joogtaynta deegaanka, noocyada, cabirka iyo ujeeddooyinka
Soo ogow yoolalka iyo cabbiraadaha waara deegaanka iyo sababta ay muhiim ugu yihiin adduunka maanta
Dalxiiska dabeecadda ayaa ku kordha Isbaanishka
Muddadii u dhaxeysay 2009 iyo 2016 Isbaanishka dalxiiska dabeecadda wuxuu ku kordhay 32%. Tani kororka dalxiiska dabiiciga ma yahay mid waara?
Erey bixinta iyo khaladaadka aan sameyno marka laga hadlayo dabka kaynta
Markaan ka hadlayno dabka kaymaha waxaan qaladaad ku sameynaa eraybixinta. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay yihiin guul darrooyinkaasi?
Waxay codsadaan in la kordhiyo hababka looga hortago gubashada
Dabka kaynta ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay Asturias, Castilla y León iyo Galicia ayaa durbadiiba dilay afar qof.
Flamingos waxay awood u leedahay inay sifayso biyaha dhulka qoyan
Flamingo waxay ku socotaa hab gaar ah, oo ay weheliyaan xaarkooda, waxay ka caawiyaan nadiifinta microbial ee walxaha dabiiciga ah qoyaanka cusbada.
Micnaha midabada weelasha dib-u-warshadaynta iyo sida ay tahay inaan ugu isticmaalno inay u fuliyaan kala soocida qashinka.
Hydroponics waa hab ka kooban isticmaalka xalka dhirta sii kordheysa.Ma dooneysaa inaad wax walba ka ogaato Hydroponics?
War yar oo wanaagsan ayaa ah in tayada guud ee hawada Spain ay waxyar soo hagaagtay sanadkii 2016, marka loo eego sanadkii ka horeeyay.
Cerdolí, oo ah hanjabaad duullaan ah oo ay sabab u tahay iskutallaabta u dhaxaysa xayawaanka duurjoogta ah iyo doofaarka Vietnam
Maanta waxaan ka hadlaynaa "doofaarka". Waa iskutallaab udhaxeysa doofaarka Vietnam iyo xayawaanka duurjoogta, taas oo noqotay dhibaato weyn oo xagga deegaanka ah.
Dib-u-warshadayntu way fududaanaysaa
Waxaan sameyn karnaa tilmaamo fudud oo fudud oo aan dib u warshadeyn karno, iyada oo aan ogaan, waxaan caawin doonnaa meeraheenna. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay tilmaamahani yihiin?
Qashinka wasakhda ah ee badda kujira ayaa dhibaato weyn ku haya deegaanka
Waxaa jira qiyaastii 12 milyan oo tan oo wasakhda caagga ah ee badaha. Maxaa ku dhacaya caagaggan iyo saameyn intee le'eg ayay leeyihiin?
Wasakhda wasaqdu waxay ka jirtaa dhammaan bay'adaha magaalooyinka iyo magaalooyinka waaweyn. Maxaa la sameyn karaa si looga fogaado?
Jilaaga weyn ayaa ku baaba'aya jasiiradaha Canary
Jasiiradaha Canary waxay la kulmayaan hoos u dhac ku yimaada mulacyada waaweyn.Miyaad dooneysaa inaad waxbadan ka ogaato saameynta hoos udhaca kuhaarka dufanka.
Ka faa'iideysiga ciidda badan wuxuu abuuraa saameyn deegaanka iyo siyaasadeed ah
Caanku waa kheyraad sii kordheysa oo qiimo leh, maadaama ay aad ugu yartahay sababo la xiriira heerarka sare ee nabaad-guurka ee ka dhalan kara xaalufka.
Ecosphere waxaa lagu qeexay nidaamka deegaanka deegaanka ee meeraha Dunida Ma waxaad dooneysaa inaad wax ka ogaato wax walba oo ku saabsan dhulgariirka? Halkan gal.
Maxay tahay inaad dib u warshadeyso saliida la isticmaalay?
Kaliya hal litir oo saliid la isticmaalay ah ayaa awooda inay wasakhayso ku dhowaad 1.000 litir oo biyo la cabbo ah. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in dib loo warshadeeyo saliidda la isticmaalay.
Eutrophication-ka biyaha waa nooc ka mid ah wasakhowga. Dhibaatooyinkee ayuu eutrophication-ka biyo kiciyaa nidaamka deegaanka dabiiciga?
U adeegsiga microalgae sunta sunta
Wasakheynta biyuhu waa mid ka mid ah cawaaqibka ugu weyn ee dhaqdhaqaaqa warshadaha. Microalgae-ga waa lagu sumoobi karaa.
Magaalooyinka iyo isticmaalka tamarta sare adduunka oo dhan
Magaalooyinku waxay si dhib yar u qabsadaan 2% dhammaan dhulka meeraha. Si kastaba ha noqotee, waxay cunaan 75% dhammaan tamarta la soo saaray.
Jaahilnimada weyn ee dadku u qabo dabeecadda
Daraasad ayaa muujineysa jahwareerka "welwelka leh" ee ay muujiyeen dadweynaha guud ee ku saabsan halista aasaasiga ah ee dabeecadda
Arctic permafrost waa dhalaalayaa
Saamaynta aadanaha iyo kuleylka adduunka, barafka ayaa dhalaalaya wuxuuna si tartiib tartiib ah u sii deynayaa gaaska methane.
Waa maxay biotope?
The biotope waa meesha haysa dadka dhirta iyo dhirta. Si aad wax uga barato wax walba oo iyaga ku saabsan iyo xiriirka ay la leeyihiin nidaamka deegaanka, halkan gal.
Dabka Doñana wuxuu waxyeeleeyay aagagga kala duwan ee lynx
Dabka ayaa saameeyay qaar ka mid ah aagagga saddexda haween ee Iberian lynx. Meelahan ayaa haweenku u adeegsadaan ugaarsiga ugaarsigooda.
Beerta Qaranka iyo Dabiiciga ee Doñana
Doñana waxaa loogu dhawaaqay sidan oo kale sanadkii 1999 iyo Park-ga Qaranka iyo Beerta Dabiiciga labadaba waxaa lagu daray liiska meelaha dabiiciga ah ee la ilaaliyo.
94% dadweynaha Isbaanishka waxay la kulmaan wasakheynta hawada
Warbixin ku saabsan tayada hawada ayaa ku qiyaastay in ku dhowaad 44 milyan oo qof ay la kulmeen heerarka wasakheynta sanadkii 2016.
Cawaaqibta dabka kaymaha
Dabka kayntu waxay waxyeelo ba'an u gaystaan ​​nidaamka deegaanka dabiiciga ah iyo waxyeelo dhaqaale iyo bulsho. Cawaaqib noocee ah ayey leeyihiin?
Deyda waxaa dib loogu soo celiyey Alhambra
Ugu yaraan toddobo sano, ma jirin wax caddeyn ah oo ku saabsan jiritaanka xeyndaab ee hareeraha Alhambra, laakiin tani waxay noqon doontaa wax caadi ah.
Maxay muhiim u tahay in la ilaaliyo posidonia oceanica?
Posidonia oceanica waxaa caan ku ah doorka ay ku leedahay xeebaha. Si kastaba ha noqotee, garan mayno sababta saxda ah in loo hayo. Halkan ka baro.
Horumarinta lamadegaanka ee Spain maalin kasta
Isbaanishka, qorshaynta liidata iyo qorshaynta dhulka ayaa dhaqaajinaya xaalufka lamadegaanka iyadoo loo sii wado qaab masiibo ah.
Dhammaan wixii ku saabsan Borotokoolka Kyoto
Hogaamiyaasha wadamada gaaska ugu badan ku sii daaya jawiga waxay abuuraan waxa loogu yeero Protocol-ka Kyoto si loo yareeyo loona ilaaliyo isbadalka cimilada
Neefsashada Dhulka ee wareegyada dhirta xilliyeed
Iyada oo loo marayo wareegyada xilliyeed ee dhirta waxaa suurtagal ah in la fiirsado sida, kuwan oo mahadsan, Dhulku "wuu neefsadaa" oo wuxuu na siin karaa oksijiin iyo cunto.
CNMC waxay fasaxaysaa abuuritaanka dhirta ugu weyn ee sawir qaadeyaasha Yurub ee Murcia
CNMC waxay ansixisay mashruuca weyn ee warshadda qoraxda ee 'Mula photovoltaic', marka la xaqiijiyo awoodda dhaqaale ee kooxda Jarmalka ee Juwi.
Ahmiyada maalinta deegaanka aduunka
Waxaan u dabaaldegeynaa Maalinta Deegaanka Adduunka oo qof walba lagu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay dhowrista iyo ilaalinta deegaanka
Caqabadaha deegaanka ee 2017
Waxaan nahay jiilkii ugu horreeyay ee gacanta noogu jira aaladaha lagu joojiyo isbedelka cimilada iyo caqabadaha kale ee na soo food saara
Magaalada casriga ah
Soo ogow waa maxay astaamaha ay tahay inay magaalo casri ah yeelato si ay u qanciso dadka degan isla markaana ay ula saaxiibto deegaanka
Rajoy wuxuu ku dhawaaqay xaraash cusub oo dib loo cusboonaysiin karo oo gaaraya 3.000 MW
Mariano Rajoy ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabay hanaankii lagu bilaabi lahaa xaraashka tamarta la cusboonaysiin karo oo dhan 3.000 megawatts (MW)
Noocyada kala geddisan ee guluubka ah, midkee ayaa la dooranayaa?
Waxay kuxirantahay noocyada nalalka aad isticmaaleyso, waad cuni kartaa + ama - tamar. Noocyada nalalka, xooggooda, isticmaalkooda, muddadooda, qiimaha iyo isbeddellada.
Qashinka lagu daadinayo
Sidan ayaa qashinka loogu daadiyaa deegaanka saameyn. Waxaan kuu sheegi doonaa sida qashinka u saameeyo tayada hawada, ciidda iyo biyaha aan cunno.
Waa maxay aerothermy?
Aerothermal wuxuu ka faa'iideysanayaa tamarta ku jirta hawada, tani waxay ku jirtaa cusbooneysiin joogto ah, iyadoo hawada u rogaysa il tamar aan la soo koobi karin.
Chernobyl mar kale ayuu nool yahay soddon sano ka dib
Dhowr bilood ka hor ayaa la ogaaday in aagga Chernobyl ee masiibadu ka dhacday ay ka buuxdo nolol.
MAALINTA DHULKA 2018 waxay noqon doontaa 22-ka Abriil
Maalinta Dhulka ee 2018 waxaa loo dabaaldegi doonaa 22-ka Abriil sida sanad walba. 1970 wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyay ee munaasabadan la qabtay. Awoodda la cusbooneysiin karo
Gooryaanka awood u leh xaalufinta balaastigga ayaa la helay
Saynisyahannadu waxay ogaadeen in nooc ka mid ah diir-ka awood u leh inuu bayoolaji ahaan hoos u dhigo polyetylen-ka ku jira caagagga.
19-ka Abriil, waa Maalinta Caalamiga ah ee Baaskiilka. Maalin caan ah oo la difaaco baaskiilleyda laguna boorriyo hay'adaha inay bixiyaan waxyaabo kale
Cawaaqibka xaalufinta dhirta
Dhibaatooyin noocee ah ayuu keenaa xaalufintu? Kuwani waa cawaaqib xumada ka dhalanaysa xaalufinta dhirta taas oo ay ugu wacan tahay waxqabadka aadanaha ee baabi'iya kaymaha iyo hawdka
Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa xulashada dabiiciga ah iyo isbeddelka noolaha
Isbedelka cimilada ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara xulashada dabiiciga ah adoo wax ka beddelaya noocyada kala duwan ee isbeddellada noolaha.
Qiiqa CO2 waxaa lagu ogaadaa meelaha oomanaha ah ee saameeya wareegga kaarboon
Nidaamka hawo-mareenka dhulka hoostiisa ayaa sababa qiiqa CO2 ee daran, taas oo si xun u saameyn doonta kuleylka adduunka.
Gas Radon iyo dhibaatooyinka ay u leedahay caafimaadkeena
Soo ogow xiriirka gaaska Radon iyo kansarka iyo haddii ay jirto khatar ka imaanaysa RADON emanations halka aad ku nooshahay.
Waa maxay beeraha iskuulku maxayse yihiin?
Beerta iskuulka carruurtu waxay xiriir la leeyihiin dabeecadda. Sidee ayey muhiim ugu noqon kartaa carruurta inay ku raaxaystaan ​​dabeecadda?
Sidee dhirta hilibka cuna ay u heleen dhadhanka hilibka?
Isbedelka iyo horumarka waxyaabaha nool ee abuuray ee u baahan in la cuno hilibka. Sidee dhirta hilib cunaya ku kasbadeen dhadhanka hilibka?
Dhulka qoyan ee Panama Bay waa xaalufin sababo la xiriira wasakheynta magaalooyinka
Dhulka qoyan ee Panama Bay wuxuu wajahayaa wasakheyn daran iyo dhibaatooyin nabaad-guur ah oo ay ugu wacan tahay koritaanka magaalooyinka oo aan nidaamsaneyn.
Xawaaraha Aasiya waa nooc duullaan ah wuxuuna saameeyaa shinidayada
Noocani duullaanku wuxuu khatar ku yahay dadka asaliga ah ee shinnida malabka ah. Maxaa ku dhici doona qashinkaas?
Xylella fastidiosa, oo ah cayayaan ku weeraraya jasiiradaha Balearic
Bakteeriyada loo yaqaan 'Xylella fastidiosa' waxay noqotay cayayaan aad ugu halista badan Yurub. Dhibaatooyinkeeda tirada badan waxay ku qasbeen inay dhintaan kumanaan geedo saytuun ah.
Geed lagula dagaallamayo isbedelka cimilada: Kiri
Dhammaan noocyada geedaha ee adduunka ka jira, waxaa jira mid gaar ah oo naga caawin kara la-dagaallanka isbeddelka cimilada. Waa geedka Kiri.
Qalab noocee ah ayaa deegaanka u wanaagsan oo sidee ayaynu ku garan karnaa?
Badar kasta oo ciid ah ayaa tirinaysa markay tahay kaydinta kheyraadka, iska ilaalinta wasakhda, iwm. Tan waxaan u isticmaalnaa qalabka bey'ada.
Podemos iyo PSOE waxay muujinayaan diidmadooda furitaanka macdanta yuraaniyamka ee magaalada Salamanca
Waxaa loogu talagalay in lagu dhiso miino laga soo saaro uranium-ka gobolka Salamanca ee Campo Charro ee degmada Retortillo.
Dhisidda buundooyinka "cagaaran" ee loogu talagalay duurjoogta
Waxa loogu yeero marinnada bey'ada ayaa ah meelaha isku xira hal deegaan iyo mid kale waana meelaha ay noocyadu ka beddeli karaan meelaha oo si fiican ugu socdaan.
Bulshooyinka ismaamula ee dib u warshadaynta ugu badan ka sameeya Spain
Bulshooyinka ismaamula ee dib u warshadaynta ugu badan sameeyay sanadkii 2014 waxay ahaayeen Andalusia, waxaa ku xigay Catalonia iyo Beesha Madrid.
Recycle a la Madrileña, olole dib-u-warshadaynta cusub ee Madrid
Golaha Magaalada Madrid iyo Ecovidrio ayaa bilaabay olole cusub oo dib loogu warshadaynayo muraayadda isla markaana dadka looga dhaadhicinayo muhiimadda ay leedahay.
Qiiqa gaaska ayaa laga yareeyay Isbaanish intii u dhaxeysay 2010 iyo 2014
Isbaanishka, qiiqa gaaska lagu sii daayo ee u dhexeeya 2010 iyo 2014 waxaa hoos u dhacay 8,9%. Maxay tani ku saabsan tahay
Khubarada bey'ada waxay diideen dhismaha labo qol oo lagu gubo Madrid
Magaalada Madrid gudaheeda, waxaa la soo jeediyay dhismaha laba qaboojiye oo cusub oo lagu daweeyo qashinka. Qaar ka mid ah kooxaha deegaanka ayaa diiday.
Maxay shinnidu muhiim ugu tahay aadanaha?
Bini'aadamka ayaa keenaya in shinni la waayo. Kuwani waxay leeyihiin shaqo aad muhiim ugu ah badbaadinteenna, waa maxay?
Xadka wasakhda hawada ayaa wax laga badali doonaa
Baarlamaanka Yurub wuxuu ansixin doonaa wax ka bedelka xeerarka si loo yareeyo qiiqa qaran ee lix wasakheynta hawada.
Qaybaha halista ku ah ilaalinta noocyada
Noocyada flora iyo fauna ee halista ugu jira baabi'inta waxaa loo kala saaray qaybo hanjabaado ah si loo ilaaliyo.
Koboc dhaqaale ama waara deegaanka?
Saynisyahannadu waxay sameeyeen daraasad xaqiijineysa in saddex meelood meel dadka reer Isbaanishku ay doorbidaan inay iska indhatiraan kobaca dhaqaalaha si loo gaaro waaritaan
Furayaasha waarta ee magaalooyinka mustaqbalka
Magaalooyinka mustaqbalku waa inay lahaadaan dhaqaale iyo bulsho ku saleysan isku dhafka tikniyoolajiyada cusub iyo kuwa cusub iyo joogtaynta.
Waxay cambaareynayaan saameynta xun ee caafimaadka ee daadashada saliida
Waxay cabasho ka muujiyeen waxyeelada caafimaad ee ka dhasha saliida ku daadata dadka ku nool agagaaraha meelaha laga soo saaro.
Muranka weyn ee biofuels iyo kaarboon laba ogsaydhka
Qadarka kuleylka ee ay heysato CO2 ee ay soo saareyso gubida biofuels ma aha mid u dhigma qiyaasta CO2 ee ay nuugtay dhirta.
Wasakhda biyaha adoo adeegsanaya graphene nanorobots
Waxaa hageya aag magnet ah, tuubooyinka yar yar ee loo yaqaan 'graphene tubes' ayaa ku keydin kara biraha culus ee biyaha wasakhaysan. Inta udhaxeysa…
Mamnuuca isticmaalka bacda oo dib loo dhigay ilaa 1-da Juun
Waxaa markii hore loo qorsheeyay Janaayo 1. Kadib waxaa dib loogu dhigay 28-ka Maarso. Waxay ugu dambayntii noqon doontaa ...
PaperLab, oo ah mashiin loogu talagalay dib-u-warshadaynta warqadda xafiiska
Epson wuxuu qarka u saaran yahay inuu ganacsi ka sameeyo mashiin si dib loogu warshadeeyo xaashida loogu talagalay shirkadaha. PaperLab wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro noocyo xaashiyo kala duwan ah iyo xitaa warqad cadar ah.
Qashinka balaastigga ah ee loo yaqaan 'Mediterranean' ayaa dib loogu rogay dharka
200 doonyood oo kuwa kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Spain ayaa bilaabay aruurinta qashinka caagga ah ee badda Mediterranean-ka. Warshad Madrid ah ayaa dib u warshadaynaysa qashinka si ay dhar uga sameysato astaanta dharka.
Wasakhowga hawada ayaa isu beddelay khad daabacaadeed
Cilmi-baare ayaa hadda soo saaray nidaam nuugid iyo shaandhayn xeel-dheer, taas oo uu ugu mahadcelinayo ka-soo-saaridda qiiqa kaarboonka ah ee wasakheynta cimilada una beddelayo khad daabacan.
Aerosols, walxahaas u roon saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo
Aerosols waa qaybo yaryar oo ku jira jawiga. Iyaga ayaa mas'uul ka ah sameynta daruuraha isla mar ahaantaana, waxay gacan ka geystaan ​​saameynta aqalka dhirta lagu koriyo iyo kuleylka.
Drones oo awood u leh inay beero hal bilyan oo geed sanadkiiba
Hadafku waa in la beero 36.000 oo miraha ah maalintii iyada oo la adeegsanayo nidaam diyaaradeed oo gaari kara meelaha fog fog ee aan la geli karin
Wasakhda Paris waxay waxyeelo u leedahay sida qiiqa tubaakada
Bishii Diseembar 13, 2013, waddooyinka Paris waxay u wasakhoobeen sida qol 20-mitir murabac ah oo ay ku jiraan sideed qof oo sigaar caba.
NASA waxay sii deyneysaa fiidiyoow muujinaya wareegga CO2 ee Dunida
NASA ayaa soo saartay muuqaal ku saabsan wareegga CO2 muddo 1 sano ah oo dhulka ah. 2006 xog
Soosaarka adduunka ee balaastikada
Soosaarka adduunka ee balaastikadu wuu kordhaa sanad walba (288 milyan tan, taas macnaheedu waa, in ka badan 2,9% sanadkii 2012), taasoo xiriir toos ah la leh kororka dadka, sidaas darteedna, iyadoo ay sii kordhayaan qashinka.
Dagaalyahanada Hindida ee ugaarsadayaasha 'ugaarsiga' Amazon ee dagaalka ugu jira mustaqbalka keymaha
Amazon dhexdeeda waxaa jira dhowr qabiilo oo u dagaallamaya mustaqbalka hawdka sida dagaalyahannada Ka'poor
Waraaqaha iyo kartoonada waxaa laga sameeyaa alwaax, tirada weyn ee waraaqda iyo kartoomada la cuno, iyo burburka kaymaha ayaa sii badanaya. Faa’iidada warqadda iyo kartoonka ayaa ah in dib loo soo celin karo oo dib loo isticmaali karo si loo sameeyo waraaqo kale iyo kartoonno.
Tundra wuxuu noqon karaa isha laga helo qiiqa kaarboon
Tundra waa barkad kaarboon fiican. Uguyaraan waxay ahayd.
Bishii Juun 1992, shirkii ugu horreeyay ee Dunida, oo ay abaabushay Qaramada Midoobay, ereyga "horumar waara" ayaa la qoray.
Sababaha ay baddu u weydo aafadeeda
Waxay ku taal Koonfurta Baasifiga, gobolkani wuxuu gacan weyn ka geystaa aafada aafada badweynta adduunka.
Waa maxay tamar cirro
Tamarta cawl badanaa waxaa laga hadlaa si loo muujiyo saameynta deegaanka ee sheyga.
Solvatten, biyaha cadceedda laga cabbo
Solvatten waa nidaam bini'aadamnimo oo lagu daaweeyo biyaha oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo biyaha kana dhigo mid la cabi karo.
Tirada nolosha qashinka dabiiciga ah
Ku-daadinta qashinka dabiicadda waxay leedahay cawaaqibyo badan oo aynaan garanaynin sida loo cabbiro haba yaraatee ... waana inay sida caadiga ah ka sii dheer yihiin sidaan filayno illaa ay ka baabi'inayaan.
Biyaha ka dhig kuwo wasakhaysan
In kasta oo ay run tahay in warshadaha ama beeralayda inta badan lagu eedeeyo wasakhaynta biyaha, haddana dadka sida gaarka ah u isticmaala ayaa iyaguna leh qaybtooda mas'uuliyadda.
Kuraasta casriga iyo deegaanka
Naqshadeynta ayaa sii kordheysa xiisaha alaabada u habboon deegaanka. Tusaale tani waa ...
Koobabka loo tuuro bey'ada ee kafeega
100% koobabka nooleyn kara waa run
Ka soo saarista saliida ciidda daamurka
Dhammaan soo saarista saliidu isku mid ma ahan maadaama meelaha qaarkood ay sahlan tahay waxyarna ka yar tahay ...
Nidaamyada hawlgalka iyo deegaanka
Nidaamyada hawlgalku dhammaantood iskumid ma aha
Dareemay, walxo bey'adeed
Dareemku waa shey bey'adeed u oggolaanaya soo saaridda alaabooyin kala duwan
Koofiyad baaskiil bey'adeed
Baaskiileyda waxaa u socda koofiyad bey'adeed oo ka samaysan kartoon
Macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan caag ah
Macluumaad iyo xaqiiqooyin ku saabsan caag
La tuuro laakiin goynta deegaanka
Goynta la tuuro waxay sidoo kale noqon kartaa deegaan
Danone waxay u isticmaashaa bioplastic yogurts
Danone waxay isticmaashaa bioplastic qaar ka mid ah alaabteeda
Leben qabsada CO2
Leben saamaynta deegaanka
Qumbaha iyo barnaamijyadeeda ku jira warshadaha
Fibreerka qumbaha ayaa beddelaya fiilooyinka macmalka ah ee isticmaalka qaarkood
Wax soo saarka deegaanka ee ku saleysan aluminium furayaasha
Wax soo saarka isbeddelka deegaanka ee ku saleysan furitaanka soodhaha
5 Sababaha ay beeshu dib u warshadaynayso
Waxaa jira sababo dhowr ah oo ay tahay in beeshu dib u warshadayso
Shirkadaha saliida ee Nigeria waxay sababeen wasakheynta oo qaadan karta 30 sano in la nadiifiyo
Nayjeeriya iyo cawaaqib xumada deegaanka ka dhalata ka faa'iideysiga saliida
Isbedelka cimilada ayaa baabi’inaya shaaha ka baxa dalka Uganda
Beerista shaaha Uganda waxay halis ugu jirtaa abaarta ka dhalatay isbeddelka cimilada
Roogagga dabiiciga iyo dabiiciga ah
Maanta waa suurtagal in la iibsado badeecadaha guryaha lagu kaydiyo sida rooga
Boorsooyin iyo qalab ka samaysan taayirro dib loo warshadeeyay
Hada waxaa jira dhowr shirkado iyo noocyo dib u warshadeeya taayirada si ay u sameystaan ​​bacaha iyo alaabada kale
Qalabka Bamboo waa ikhtiyaar bey'adeed u habboon guriga ama xafiiska
Maxay badeecooyinka dabiiciga u qaalisan yihiin?
Alaabada dabiiciga ah iyo qiimahooda
Muhiimadda ay geeduhu u nuugaan
Awoodda dhirtu u leedahay inay CO2 ka soo qaadato jawiga waa mid aad muhiim u ah
Kabaha daryeelka deegaanka
Nooca Faransiiska ee FYE wuxuu bixiyaa kabo bey'adeed
Warshad cusub oo dib-u-warshadaynta qashinka elektiroonigga ah ee Mérida
Dhamaadka sanadka, dhismaha warshad dib-u-warshadaynta ee Mérida waa la dhammaystiri doonaa
Faa'iidooyinka saliida dib u warshadaynta
Markii aan saliida wax ku karsano ama saliida baabuurka ku shubno saxanka hoose, waxaan dhibaato u geysaneynaa badaha iyo badaha maxaa yeelay waxay sameysaa filim aan biyuhu xireyn oo xiraya marinka qorraxda iyo isdhaafsiga oksijiinta nolosha badda.
Daraasad ku saabsan isticmaalka nadaafadda iyo wax soo saarka deegaanka
Daraasad ayaa laga sameeyay deegaanka iyo alaabada nadaafadda shaqsiyadeed ee dalal dhowr ah
Doomaha raaxada waxay wasakheeyaan oo lumiyaan tamar badan
Warshadaha toy-ka iyo xaalufinta
Warshadaha caruurtu ku ciyaaraan waxay ku lug leeyihiin jarista dhirta ee Indonesia
Dib-u-warshadeynta xafaayadaha oo soo saar gaaska dabiiciga
Mashruuca dib-u-warshadaynta xafaayadaha carruurta iyo soosaarida gaaska noolaha
Qashinka caaga ah ayaa ogolaanaya soosaarka biodiesel
Qashinka caaga ah ayaa suurtogal ka dhigaya in la soo saaro shidaal
Koobab la cuni karo oo la baabiin karo
Koobab la cuni karo oo la baabiin karo si deegaanka loo daryeelo
Saxarada xayawaanka si loo sameeyo warqad
Saxarada xayawaanku waxay noqon kartaa walxo cayriin ah oo lagu sameeyo warqad
Ilaalinta jijin qoryo
Ilaalinta deegaanka waa ikhtiyaar weyn haddii aan daneyneyno daryeelka deegaanka
Qashinka dabiici ah wuxuu sameyn karaa nafaqeyn guryaha lagu sameeyo
Qashinka dabiiciga ah dib ayaa loogu isticmaali karaa compost ama compost si loogu isticmaalo bacriminta dhirtayada. Qashinka yaryar ee yaryar ayaa lagu suuqgeeyaa suuqa iyada oo, qaab fudud, aan ku soo saari karno compost.
Waxyaalaha baaba'aya ayaa sidoo kale sumayn kara
Buugta waraaqaha dib loo rogay
Buugta waraaqaha dib loo warshadeeyay waa kuwo deegaanka u roon
Ragga waxay u isticmaalaan tamar ka badan tan dumarka nolol maalmeedkooda waxayna saameyn weyn ku leeyihiin deegaanka
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in haweenku ay ka tamar yar yihiin ragga isla markaana howl maalmeedkooda ay saameyn yar ku yeeshaan deegaanka.
Huteelada NH waxaa ka go’an dib-u-warshadaynta
NH waxaa ka go'an inay dib u warshadayso xarumaheeda
Guryaha alwaaxda ah ayaa ah bedelka deegaanka
Guryaha alwaaxda ah ayaa ah bedelka deegaanka maadaama ay yihiin wax la cusboonaysiin karo. Waxay leedahay waxqabadka dahaarka fiican, dhismaha qalalan oo hufan.
Soo saarista buugaag daabacan ayaa wasakheeya deegaanka
Soosaarida buugaagta la daabacay waxay maraan habab wasakhaynaya deegaanka wax soo saarkiisana waxaa lagama maarmaan ah in la jaro malaayiin geed sanadkiiba. Buugga elektaroonigga ah elektaroonigga ah waa beddel cagaaran.
Magaalooyinka adduunka ayaa lagu iftiimiyay nalalka LED-ka
Magaalooyinka iyo magaalooyinka adduunka oo dhan waxay ku darsadeen nalalka LED-ka iftiiminta dadweynaha maadaama ay abuurayaan keyd tamar oo muhiim ah ayna yareeyaan qiiqa CO2.
Maxaan u qaadan karnaa meelaha nadiifka ah
Qodobada Nadiifinta ah waa goobo loo kala qaybiyey dhammaan magaalooyinka Isbaanishka halkaas oo aad ku qaadan karto qashin aan lagu dhex reebin weelasha maxaa yeelay aad bay khatar ugu tahay deegaanka.
Sidee looga faa'iideysan karaa biyaha roobka
Biyaha roobka waxtar ayey u yeelan karaan adeegsiyo kala duwan oo guriga ah, waad soo ururin kartaa oo waad sii deyn kartaa si aad u yarayso isticmaalka biyaha la cabbo ee guriga, adoo ka caawinaya deegaanka.
Daynta deegaanka ee wadamada horumaray
Daynta deegaanka ee wadamada horumaray aad ayey u sarreysaa
Madbacadaha bey'ada ku habboon
Daabacaadda warqadda waxay sii wadaa inay walaac ku hayso deegaanka. Marka lagu daro ololeyaasha keydinta, shirkaduhu waxay isku dayayaan inay soo saaraan tikniyoolajiyado u oggolaanaya inay isticmaalaan warqad iyo khad yar.
Qurxinta Canadian-ka waxay soo saartaa kooxo aroosyo leh dheeman dabiici ah
Shirkadda Canadian ee Brilliant Earth waxay abuureysaa baloogyo aroosyo iyo faraantiyo is dhexgal ah oo leh dheeman dabiici ah, dahab iyo platinum.
Bioplastic laga sameeyay baalasha digaagga
Bioplastic waa ikhtiyaar loogu talagalay mustaqbalka in lagu beddelo caag saliid ku saleysan
Dharka dabiiciga ah ee moodada waarta
Moodhadhku wuxuu ku biirayaa gaariga bey'ada si uu u sameeyo qaybo dhar ah oo lagu sameeyay walxaha bey'ada sida suufka dabiiciga ah kaas oo beeritaankiisa lagu fulinayo ixtiraamka caafimaadka, deegaanka iyo xuquuqda aadanaha.
Dagaalada iyo isku dhacyada hubeysan waxay soo saaraan wasakh aad u tiro badan
Dagaalada iyo isku dhacyada hubaysan waxay soosaaraan nabaad-guur deegaan oo halis ah
Isticmaalka iyo dhibaatada deegaanka
Isticmaalku waa mid ka mid ah kuwa mas'uulka ka ah dhibaatada deegaanka ee hadda jirta
Noocyada geedaha magaalooyinka iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo nuugaan CO2
Waxaa jira noocyo gaar ah oo geedo ah iyo dhir leh awood ballaaran oo ay ku nuugaan CO2
Hababka gaadiidka iyo CO2
Macnaha gaadiidka waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee wasakheynta hawada adduunka
Gaadiidka badda iyo qiiqa CO2
Gadiidka bada waa qeyb waxbadan kusoo kordhineysa wasakheynta
Kala sareynta shirkadaha tikniyoolajiyadda ugu saaxiibtinimada badan deegaanka
Muddo dhawr sano ah, Greenpeace waxay soo saartay warbixin halkaas oo ay ku qiimaynayso dhaqanka deegaanka ee shirkadaha teknolojiyadda. Tan…
Polystyrene wax u dhimmi kara
Saliidu waxay leedahay codsiyo badan, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah sameynta xumbada loo yaqaan 'polystyrene foam', oo ah badeecad si weyn loo isticmaalo ...
Tamarta ayaa muhiim u ah in lagu gaaro horumar dhaqaale dal ama gobol tan iyo inta badan ...
Wareega gawaarida waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee keena wasakheynta deegaanka ee magaalooyinka waawayn magaalooyinka Isbaanishka ...
Tamarta Buluugga ah
Fikradda tamarta buluugga ah waa wax aan dad badani ogayn, laakiin waxay u jeeddaa il tamar kale ah ...
Faa'iidooyinka gaaska noolaha
Biogas waa hab deegaan oo lagu dhaliyo gaaska. Waxaa lagu soo saaraa burburka qashinka ama walxaha dabiiciga ah. The…
Dalalka saboolka ah iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Wadamada horumaray waxaa ka jira koboc dhanka horumarinta, soo saarista iyo isticmaalka tamarta nadiifka ah iyo kuwa la cusboonaysiin karo. Laakiin tan…
Tikniyoolajiyadda iyo wax soo saarkooda wax ku oolka ah iyo cilmiga deegaanka waxay u muuqdaan, sida laydhadhka laydhadhka….